Ndụ ga-ama mma mgbe ị mụtara imere onwe gị ihe dịkwa ka gị na ndị ọzọ. - Amaghi ama - Quedia Pedia
Lovehụ onwe gị n'anya bụ ihe dị mkpa mana anyị na-eleghara ya anya mgbe niile n’ichekwa mmekọrịta dị iche iche na ndụ. Ọ dị gị ka ijigide mmekọrịta ndị ahụ dị oke mkpa n'ihi na ọ bụ ndị ị hụrụ n'anya ma na-elekọta karịa.
Mana ikwesiri ịghọta na ịkwesịrị ilekọta onwe gị anya ka ị na-elekọta ndị ọzọ. Wepụta oge iji nọrọ naanị gị. Kpoo ihe ị hụrụ n'anya n'ezie ma soro mee ya. Nye onwe gị ohere iji too ma mata onwe gị.
Naanị mgbe ị hụrụ onwe gị n'anya, ị ga-enwe ike ịhụ ndị ọzọ n'anya nke ọma. Ọ pụtaghị na anyị ga-ebu ụzọ lebara onwe anyị anya. Ọ pụtara na anyị tinyere onwe anyị na ndepụta nke mkpa. Ọ nwere ike ịda kedu ya, mana anyị na echefukarị na ibido mkpa nke anyị ịdaba na ngbenye nke ndụ.
Ndụ ga-amagbu onwe gị mgbe ị nwere ezigbo ọ .ụ. Will ga - enweta ebe obi uto gi. Might nwekwara ike ịchọpụta ụdị mmụọ ị na-amabeghị. Yourselfhụ onwe gị n'anya nke ọma pụtara ịbịakwute ezi onwe gị.
Mgbe ị na-achọpụta onwe gị karịa, ị ga-amalite ịhụkwu onwe gị n'anya. Nke a na - eme gị obi ụtọ ma na ị dị njikere ịgbasa ndị ọzọ ọ joyụ.
N’ihi ya, ọ dị mkpa ichefula onwe gị n’ọchịchọ nke ịbụ ezigbo mmadụ n’anya ndị ọzọ ma ọ bụ ilekọta ndị hụrụ ha n’anya. Zụlite onwe gị na mkpa na ndị ọzọ tokọ ọnụ na-ebi ndụ mara mma.
Ezi okwu mkpali ututu oma
Ezigbo Okwu ụtụtụ
Ezi echiche nke ubochi
Ihe omumu a mutara na ndu
Onwe gi Quotes
Imejọ onye ọzọ agaghị ebelata mgbu gị. - Amaghi ama
Oge ụfọdụ, mgbe iwe were anyị ma ọ bụ merụọ anyị ahụ site n'ime obi anyị, naanị ihe anyị ga-eme…
A na-ewulite ezi ịhụnanya na ịchụ aja, àjà ahụ na-apụtakarị ibute mkpa ndị ọzọ ụzọ karịa nke gị. - Amaghi ama
A na-ewulite ezi ịhụnanya na ịchụ aja, àjà ahụ na-apụtakarị ibute mkpa ndị ọzọ ụzọ karịa nke gị. -…
Echefula ndị leghaara gị anya mgbe ịchọrọ ha na ndị nyeere gị aka tupu ị jụọ ajụjụ. - Amaghi ama
Echefula onye leghaara gị anya mgbe ịchọrọ ya. Ije ije n'okporo ụzọ nke ndụ, ị…
Maka ndị niile nwere nsogbu ugbu a, Cheta - ọ bụ obere oge. - Amaghi ama
Maka ndị niile nwere nsogbu ugbu a, Cheta - ọ bụ obere oge. - Amaghi ama…
Echere ka ihe gha ka nma. Ndụ ga na-agbagha mgbe niile. Mụta inwe obi ụtọ ugbu a, ma ọ bụghị na ị ga-agwụ n'oge. - Amaghi ama
Ikwesighi ichere ka ihe ghazie. Mara na ndụ na-agbagha oge niile, ma ị nweghị ike…